Mgbanwe Ọrụ Mgbanwe Na-agbanwe? | Martech Zone
Mgbanwe Ọrụ Mgbanwe Na-agbanwe?
Mọnde, Febụwarị 18, 2013 Mọnde, Febụwarị 18, 2013 Jenn Lisak Golding
Dị ka anyị niile maara, ahịa na ahịa na-agbanwe mgbe niile. Ya mere, ndị ahịa na funnels ahịa na-agbanwe. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ọ gaghị enwe mmasị na ya, anyị nwere imeghari.
RainToday.com bipụtara nso nso a na isiokwu a, na-egosi nke anyị ndị na-akwado akpaaka ahịa, Aka nri Na mmekọrịta. Troy Burk, onye isi oche na onye nchoputa, na-ekwu okwu ọma. Ma enwere nghọta nke na-atụ ụjọ maka ndị na-ere ahịa:
Dabere na Forrester Research, ihe ruru ọkara nke ndị ahịa B2B niile kwuru na ha mechiri ihe na-erughị 4% nke ahịa niile ewepụtara. Ọzọkwa, ihe na-erughị 25% nke ego niile metụtara ahịa.
Dịka onye na-azụ ahịa, nke ahụ na-atụ egwu. Chee echiche banyere ya - ọ bụ ọrụ anyị ịmepụta ndị na-eduga ma zụlite ha. Ọ bụrụ n’anyị na-agbanwe 4%, yabụ na ndị ọrụ c-larịị anyị agaghị enwe obi ụtọ n’ebe anyị nọ ma ghara ịnwe itinye ego na mbọ anyị. N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ a, nke a abụghị n'ezie ma ọlị.
Anyị dị mkpa na nzukọ niile. N'ezie, ọ bụ ezie na ihe dịka 75% nke ego ahụ na-abịa site na ndị na-ere ahịa na ndị na-ezo aka, ọtụtụ mmefu ego na-aga n'ihu na -emepụta ma na-azụlite ụzọ ọhụrụ na oghere ahịa. Anyị na-viable! Ma ọ dị mkpa.
Nsogbu zuru oke na ụwa dijitalụ taa na-akwado ahịa na ahịa. Na omenala, ndị a abụwo ngalaba abụọ dị iche iche. N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ha nọ ma ọ bụ na ha anọghị n’ọgbọ ọhụụ, ọ dị mkpa na atụmatụ ire ahịa na atụmatụ ire ahịa na-adaba ma nwee usoro a na-ahụ anya ka e wee nwee ike inye aka na-aga n’ihu. Ahịa akpaaka bụ ụzọ iji mee nke a. Ahịa na-eziga ahịa adreesị ozi-e ọhụụ ọhụrụ, ahịa na-agbakwunye ha na sistemụ ahụ, usoro akpaaka ahịa na-emepụta ma na-agbado profaịlụ ndị ahịa, ndị abụọ ahụ nọkwa “ugbu a” gbasara ihe atụmanya na-eme yana mgbe ha na-eme ya. Nke a abụghị mgbe niile ọrụ ahụ, mana ọ bụ ntọala maka ihe nwere ike ịbụ ụzọ ịga nke ọma maka imechi ọtụtụ ụzọ maka azụmaahịa.
Ebumnuche nke olulu ahịa na ọfụma ahịa nwere ike ịdị iche, mana oku na-arụ ọrụ na usoro ndụ ahịa yiri nke a, site na ntanetị. Gịnị ma unu rụọ ọrụ ọnụ?
Marketingzụ ahịa na ire ahịa dịkwa oke mkpa maka ịre ahịa ndụ - ka anyị kwụsị ịlụ ọgụ ma bido ịrụ ọrụ dịka otu.
Tags: nkwurịta okwuakụrụngwa ahịaọfụzụ ahịaNa-atụ anyaụlọ nkwonkwo ahịa
Steeti nke Ọdịnaya Ahịa Ahịa
M-Azụmaahịa na-aga n'ihu
Feb 18, 2013 na 1:40 PM
Ihe a bu ihe m nwetakwara. Ọ bụchaghị na enwere ịhụnanya ọ bụla furu efu n’ahịa na ire ahịa, kama na anyị nwere ihe ndị dị mkpa. Ahịa (n'ụwa m) gbasara metrics na ROI (ikekwe ngwaahịa nke igosipụta uru anyị bara uru), ebe ahịa na-echegbu onwe ya gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na imechi ndị ahịa ọ bụla n'otu oge.
Nnukwu njikọ anyị bụ naanị nyochaa olulu kpamkpam site na usoro mmechi ire. Enwere m ike ịgbaso ụzọ ndị anyị na-eweta, mana anyị ga-adabere na ndị ọrụ na-ere ahịa ka m banye wee soro ezigbo ego ha nwetara, nke na-abụghị mgbe niile. Ikpokọta na eziokwu na anyị na ụlọ ọrụ (dị nnọọ elu ego ọrụ, ukwuu n'ime), anyị na-eduga nwere ike na-abịa site ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke narị emetụ, na n'ezie kpọgidere ROI na ihe ọ bụla ọrụ pụrụ isi ike.
Feb 18, 2013 na 2:56 PM
Daalụ maka ikwu, Tyler! Ekwenyere m na okwu gị gbasara ihe dị iche iche dị mkpa. Nke ahụ bụ eziokwu. Mana echere m na ọ bụrụ na anyị abụọ amata na mbọ anyị na-arụ n'otu ebumnuche site na ịme ihe dị iche iche, mgbe ahụ anyị nwere ike ịkwado ihe ndị anyị na-ebute ụzọ n'ụzọ ka mma (ma nweta ụgwọ ọrụ!).
Dị ka ROI na-aga, Echere m mgbe niile na ọ siri ike ikpebi ROI maka ahịa ma ọ bụ ahịa n'ozuzu ya. E nwere eme anyị na-eme nwere ike ọ gaghị enwe a “price mkpado” na ha. O doro anya, onye na-ere ahịa nwere ike ịnwe kọfị nwere atụmanya nwere ike ma ha pịa, na nke ahụ bụ mgbe atụmanya ahụ kpebiri na ha chọrọ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ma ntughari ahụ emeghị ruo ọnwa 2 mgbe e mesịrị n'ihi ihe ndị ọzọ dị n'ime ma ọ bụ nke mpụga. Na a "multiple aka mgbe" ụwa, anyị na-amaghị mgbe anyị mere mmetụta. Kedu ihe omume kwesịrị inwe ROI? Ihe niile edochaghị anya ma sie ike ikpebi.
Feb 18, 2013 na 3:36 PM
Ekwenyere m. Ọ bụghị nsogbu dị mfe iji dozie. Ihe m na-eme bụ iji nyocha nke ọnụ ọgụgụ site na oke olulu gị wee chọpụta ụdị mmemme ị kacha baara gị uru.
Yabụ, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị kwuo na 2% nke okporo ụzọ okporo ụzọ na saịtị gị nyefere arịrịọ maka ozi ndị ọzọ, na nke 2%, 30% mechara gbanwee ahịa, ahịa ndị ahụ ruru $ 100k, mgbe ahụ i nwere ike ime nyocha. chọpụta uru onye ọhụụ ọhụụ ọ bụla ị na - ewepụta - nke bụ ROI kegidere na oge / mgbalị SEO gị.
Ikwuru na otutu isi ihe metutara ya. Oh - tụkwasị m obi - amaara m nke ahụ niile. Ma, echere m na anyị ga-enwerịrị ihe nha anya iji bulie usoro anyị, bulie dollar anyị, ma bulie oge anyị. (Dịka ọmụmaatụ, anyị kwesịrị itinye 10 awa karịa kwa ọnwa na-arụ ọrụ na SEO? - ọ na-enye anyị ezigbo ego ileba anya na nkwụghachi ụgwọ).
Feb 18, 2013 na 3:40 PM
Isi ihe, Tyler. Daalụ maka echiche gị! Naanị soro gị na Twitter. Na-atụ anya ịnụ ihe.